Miyuu dhacay calankii kubbadda cagta ee Talyaaniga? - BBC News Somali
Miyuu dhacay calankii kubbadda cagta ee Talyaaniga?
Image caption Azzurri
Xulka kubbadda cagta ee Talyaaniga ayaa ka haray koobka adduunka markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1958-dii, waxaana hadda la'isweeydiinayaa in Talyaaniga uu luminayo mucjisaddii ciyaaraha isaga oo horey ugu guuleystay 4 koobka adduunka ah.
Xulka Sweden ayaa Azzurri kaga badisay 1-0 ciyaarihii loogu soo baxayay koobka adduunka.
Goolhaye Buffon ayaa qarankiisa u saftay 175 jeer muddadii 20-ka sano ahayd ee uu dalkiisa u safanayay.
Real Madrid oo markii 12-aad qaadday Champions League-ga
Talyaaniga oo balaayiin Yuuro ku bari-taaray baanan kici lahaa
Isbuurasho ka dhacday Talyaaniga oo '1,000 ay ku dhaawacmeen'
Image caption Buffon
Balse malaha guuldarooyinka wali afkooda ka qaraar Talyaaniga waxaa ka mid ah tii ay kala kulmeen dalka Waqooyiga Kuuriga sanadkii 1966-kii.
Si kastaba ha ahaatee guuldarada xiligan usoo hoyatay Talyaaniga waa mid aysan cidina filanaynin, waxayna noqonaysaa markii koowaad muddo 60 sano ah oo Talyaaniga ay usoo bixi waayaan Koobka Adduunka.